MM27 andian-dahatsoratra miolakolaka
FAMERENANA NY FITATERANA MARINA-2021
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-30
Ao amin'ny famerenana ny fitaterana an-dranomasina ho an'ny taona 2021, ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny varotra sy ny fampandrosoana (UNCTAD) dia nilaza fa ny fiakaran'ny vidin'ny entana entana amin'izao fotoana izao, raha maharitra, dia mety hampitombo ny vidin'ny fanafarana eran-tany amin'ny 11% ary ny vidin'ny mpanjifa amin'ny 1.5% eo anelanelan'izao fotoana izao. ary 2023. Ny fiantraikan'ny...
Ireo firenena 32 ao amin'ny Vondrona Eoropeana dia nanafoana ny saran-dàlana tafiditra ao Shina, izay hampiharina manomboka ny 1 Desambra!
Namoaka fampandrenesana vao haingana ihany koa ny Fitantanana ankapoben'ny Fadintseranana ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina milaza fa, manomboka ny 1 Desambra 2021, dia tsy havoaka intsony ny taratasy fanamarinana momba ny fiaviana amin'ny ankapobeny ho an'ny entana aondrana any amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana, Royaume-Uni. Kanada,...
Nvidia dia miditra amin'ny meta universe
Araka ny voalazan'i Geek Park, tamin'ny fihaonambe tamin'ny fararano CTG 2021, dia niseho indray i Huang Renxun mba hampiseho amin'ny tontolo ivelany ny firaiketam-pony amin'ny universe meta. "Ahoana ny fampiasana ny Omniverse ho an'ny simulation" dia lohahevitra iray manerana ny lahatsoratra. Ahitana ny teknolojia farany amin'ny sehatry ny qu...
Lalao Aziatika 2022: Hatomboka ny Esports; FIFA, PUBG, Dota 2 amin'ireo hetsika medaly valo
Hetsika fihetsiketsehana tamin'ny Lalao Aziatika 2018 tany Jakarta ny Esports. Ny ESports dia hanao ny voalohany amin'ny Lalao Aziatika 2022 miaraka amin'ny medaly amin'ny lalao valo, hoy ny Filankevitry ny Olaimpika any Azia (OCA) tamin'ny alarobia. Ny lalao medaly valo dia FIFA (nataon'i EA SPORTS), lalao aziatika ...
Inona no atao hoe 8K?
Ny 8 dia avo roa heny noho ny 4, sa tsy izany? Raha ny momba ny famahana horonan-tsary / efijery 8K dia ampahany ihany no marina. Ny fanapahan-kevitra 8K matetika dia mitovy amin'ny 7,680 amin'ny 4,320 piksel, izay indroa ny famaha marindrano ary indroa ny famaha mitsangana amin'ny 4K (3840 x 2160). Saingy tahaka ny mety ho azon'ny manampahaizana matematika rehetra ...
Lalànan'ny EU hanery ny charger USB-C ho an'ny finday rehetra
Ny mpanamboatra dia voatery mamorona vahaolana famandrihana manerantany ho an'ny telefaona sy fitaovana elektronika kely, eo ambanin'ny fitsipika vaovao naroson'ny Vaomiera Eoropeana (EC). Tanjona ny fampihenana ny fako amin’ny alalan’ny famporisihana ny mpanjifa hampiasa indray ny charger efa misy rehefa mividy fitaovana vaovao. Ny finday avo lenta rehetra dia namidy i...
Ahoana ny fisafidianana PC Gaming
Ny lehibe dia tsy tsara foana: Tsy mila tilikambo lehibe ianao raha te hahazo rafitra misy singa avo lenta. Mividiana tilikambo birao lehibe ihany raha tianao ny fijery azy ary mila efitrano maro hametrahana fanavaozana ho avy. Makà SSD raha azo atao: Izany dia hahatonga ny solosainao haingana kokoa noho ny fandefasana ...
Ny endri-javatra amin'ny G-Sync sy Free-Sync
Endri-javatra G-Sync Matetika ny mpanara-maso ny G-Sync dia manana vidiny avo lenta satria misy fitaovana fanampiny ilaina hanohanana ny kinova fanavaozana adaptive an'i Nvidia. Raha vao vaovao ny G-Sync (nampidirin'i Nvidia tamin'ny taona 2013), dia mitentina 200 dolara eo ho eo ny vidinao hividianana ny dikan-tsarimihetsika G-Sync, ny rehetra...
Ny Guangdong ao Shina dia mandidy ny orinasa hanapaka ny fampiasana herinaratra noho ny toetr'andro mafana
Tanàna maromaro ao amin'ny faritanin'i Guangdong any atsimon'i Shina, toeram-pamokarana lehibe iray, no nangataka ny indostria hanakanana ny fampiasana herinaratra amin'ny fampiatoana ny asa mandritra ny ora maro na andro mihitsy aza satria ny fampiasana orinasa avo lenta miaraka amin'ny toetr'andro mafana dia manenjana ny rafitry ny herin'ny faritra. Ny famerana ny herin'aratra dia fanerena indroa ho an'ny ma...
Ahoana no hividianana PC Monitor
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-28
Ny monitor dia ny varavarankelin'ny fanahin'ny PC. Raha tsy misy ny fampiratiana mety dia ho toa tsy misy dikany ny zavatra rehetra ataonao amin'ny rafitrao, na milalao ianao, na mijery na manova sary sy horonan-tsary na mamaky lahatsoratra amin'ny tranokala tianao indrindra. Ny mpivarotra hardware dia mahatakatra ny fiovan'ny traikefa amin'ny dif...
Ny tsy fahampian'ny chip dia mety hivadika ho oversupply amin'ny 2023, hoy ny orinasa mpanadihady
Ny tsy fahampian'ny chip dia mety hivadika ho oversupply amin'ny 2023, hoy ny orinasa mpanadihady IDC. Izany angamba dia tsy vahaolana vahaolana ho an'ireo maniry mafy amin'ny silisiôna sary vaovao ankehitriny, fa, hey, farafaharatsiny manome fanantenana fa tsy haharitra mandrakizay izany, sa tsy izany? Ny tatitra IDC (tamin'ny alàlan'ny The Regist...
Fanaraha-maso lalao 4K tsara indrindra ho an'ny PC 2021
Miaraka amin'ny pixel lehibe dia tonga ny kalitaon'ny sary. Noho izany dia tsy mahagaga raha mirehidrehitra amin'ny mpanara-maso misy famaha 4K ny mpilalao PC. Ny tontonana misy 8,3 tapitrisa pixel (3840 x 2160) dia mahatonga ny lalao tianao ho tena maranitra sy tena misy. Ho fanampin'ny maha fanapahan-kevitra ambony indrindra azonao raisina amin'ny g...
Ny sandan'ny anjara Perfect Display Technology Co., Ltd.